Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato xeryaha spiro - APICMO
Aqoonta caafimaadka > Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato xeryaha spiro
Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato xeryaha spiro
08 / 28 / 2018Posted by: APICMOCategory: Aqoonta caafimaadka0 jecel yahay
Hordhaca maadooyinka Spiro
Qaybta spiro waa hab dabiici ah kaas oo laba siddo baaskiil ah lagu dhejiyo hal unug. Dabeecadda, dhismayaasha siddeedda ah waxay noqon karaan kuwo isku mid ah ama kuwo ka duwan, iyo in atomku isku xiro labada waji waxa loo yaqaan spiroatom (atom spiral), caadi ahaan waa darajo 4 (oo sidoo kale loo yaqaan carbon carbon spiral), sidoo kale waa silikoon, fosfooraska, ama arsenic. Spiro atomu guud ahaan waa aamiin kareer ah. Qalabka spiro wuxuu isticmaali doonaa qudaarta si uu u qoro nambarada si qaas ah. Lambarka taleefanka sidoo kale waxaa ku jira spiro atom laftiisa, lambarka yarna wuxuu ku jiri doonaa lambarka hortiisa iyo kala-soocida dhibic.
Ugu yaraan laba siddeed oo ka mid ah molecule waxay wadaagaan aalado kaarboon (oo ah xeryahooda kale, jajabyada kale, sida silicon, fosfooraska, arsenic, iwm.). Labada dhinacba waxay ku yaalaan labo diyaaradood oo midba midka kale ah: Xayndaabyada isweydaarsiga ku habboon ee la beddeli karo waa mid kiimik ah waxaana lagu xallin karaa isdifaacayaasha yaryar (eeg aragtida isomerism). Marka la eego qaabka, propionene H2C = C = CH2 waa midda ugu fudud ee spiro, iyo fiyuusta habboon ee la beddelay sida 1,3-propadienediic acid waa optically fir fircoon oo loo kala qaybin karo laba raadiyaal oo firfircoon. jirka.
(1) Marka loo eego tirada istiraatiijiyadaha spiro, kooxda spiro waxaa loo kala saari karaa hal unug oo spiro ah, dispiro, seddex laab spiro, iyo isku dhafan badan oo isku dhafan oo ay ku jiraan jumlado badan oo spiro ah.
(2) Qalabka xargaha xargaha iyo xajmiga spiro heterosyclic waa lagu kala saari karaa iyadoo la raacayo nooca atomka ah ee lagu soo koobi karo, iyo marka markaa kaarbooni ka sameysan karbosyclic spiro waxaa lagu bedelaa atom kale, heterosyclic spiro waa la sameeyay.
(3) Marka la eego nooca giraanta, waxaa loo qeybin karaa xayndaabyo, istiraatiijiyo, alaabo iyo alifhaf spiro.
(4) Xiriirinta heterospirocyclic hinge. Noocyada Spiro-yada ee Spiro waxaa laga yaabaa inay noqon karaan atomi biro ama waxyaabo kale sida Si, N, P, Ge iyo wixii la mid ah. Haddii spiro-atomi yahay atom bir ah, isku-xirka isku-xiran guud ahaan ayaa la sameeyay, iyo sida nooca spiro ah waxaa loo yaqaannaa isku-dhexaadin heterosyclic.
Maaddada spiro ee polymeric
Maaddada spiro ee polymeric waa isku dhafka laba ama kabadan spiro sida saddexda ama wax ka badan. Marka magaca magaca spiro, sifooyin tiro ah oo ku daraya di-, tri- tetra-, tetra-, ... iwm. Magaca waxaa loola jeedaa tirada jajabka ee spiro oo si gooni ah u dhex yaala siddeeda. Atomyada ku jira xerada spiro ayaa si nidaamsan loo tiriyay. Ereyga loo yaqaan 'polyspirosyclic compound' wuxuu ka bilaabmaa maaddada isweydaarsiga ah ee isku xirta spiro atom, kaas oo loo yaqaano giraanta terminalka. Mammogaradahaan polyspirosyclic waxay yeelan karaan laba ama ka badan siddeedda hawleedka waxayna ku xiran yihiin aalado badan oo spirosiklic ah. Waxaa ka mid ah, kaliya hal atomi fiilo ah ayaa isku xiran yahay midba midka kale. Naqshadeynta wareegga gundhigga waxaa lagu bilaabayaa by atom ka soo galaya spiro atom, oo lagu tiriyo sida lambarka 1, iyo molecule ka dibna la tiriyo bilawga molecule.
Laba ama in ka badan oo ah siddeed dhedheed, nambarka bilawga ah ee giraangarta terminal wuxuu yeelanayaa hab kale oo xulasho ah. Marka spiroatom ugu horeysay ee la tiriyo, xeryahooda xiga ee spiro waa in ay ku xiran yihiin sida ugu yar ee suurtogalka ah. Tirinta. U maleynayaa in uu jiro iskuul leh laba siddeed hawleed, mid leh Xameetada 6 iyo kan kale ee la yiraahdo atomic 8. Tirinta waxaa la bilaabaa iyada oo la adeegsanayo silsilad 6, maxaa yeelay ka dib lambarka, spiroatom waxaa lagu tirin doonaa 6. Haddii giraantu ay ka kooban tahay jumlado 8 ah, spiroatom waxaa lagu tirin doonaa 8. Jihada lambarka waxaa lagu go'aamiyaa spiroatom (laga bilaabo bilawga ugu horeeya ee giraanta hore ee tirinta). U sheeg in atomiga salku uu bilaabmayo lambar hal dhinac ah, oo haddii lambarkiisu ka yar yahay lambarka dhinaca kale, xalka salka ayaa la xushay. Jihada oo leh lambar yar ayaa loo isticmaalaa si loo bilaabo magaca loo yaqaan. In atom atomiciga ah, tirada tirada lambarka ma aha mid aad u muhiim ah. Xaaladaha qaarkood, laba, sadex, afar ama wax ka badan spiroatoms ayaa lagu barbardhigayaa isla lambarro iyadoo aan loo eegin jihada ay ku qoran yihiin. Xulashada jajabinta lambarka waxaa lagu xushay habka lambarrada marka tiro kale oo ka mid ah jajabyada la isku dhejiyo, iyo jihada jajabyada hoose ee lambarrada ah. Tusaale ahaan, haddii nambarka halbeegga ah uu yahay mid hal wareeg ah, tirada spiroatom kasta waa 3, 5, 7, 10, iyo tirooyinka xawaaladaha ee dhinaca kale waa 3, 5, 7, 9, ka dibna jihada lambarka labaad waa la doortaa. . Xaaladdan oo kale, jihada lambarka koowaad, lambarka u dhexeeya labada isdhex galka ah waa 7 iyo 10, iyo jihada lambarka soo horjeeda, 7 iyo 9. Tirinta wax kasta oo atomi ah ka dib markaa aan muhiim ahayn, iyo jihada lambarka waxaa lagu go'aamiyay jihada lambarka 9.
Magac-tirida tiro fara badan oo badan, lambarka ugu horeeya ee kuxirsan ayaa muujinaya in atomarka ugu horreeya ee ugu dhow ee spiro atom yahay lambarka. Tirooyinka soo hadhay waxay ka dhigan yihiin tirada jajabka ee udhaxeeya jajabyada spiro, ama jajabyada ku jira giraanta terminalka. Lambar kastaa waxa loo kala soocaa muddo (mudada Ingiriiska). Tusaale ahaan, waxaa jira laba ashyoon (oo loo yaqaan 1 iyo 2) ka hor intaan la helin spiroatom (3). Ma jiraan jajab u dhexeeya 3 iyo 4 spiroatoms, isla sidaasna waa run u ah daawada 4 iyo 5, 5 iyo 6. Waxaa jira laba jajab oo ku jira giraanta labaad ee galka, 6 iyo 5, 5 iyo 4, waxaana jira mid u dhexeeya 4 iyo 3.
Sidaa darteed, isku xigxiga [2.0.0.0.2.1.1.1] waa la helayaa. Tusaale ahaan dhinaca midigta, waxaa jira laba shaashad, sidaas darteed magaca nambarku wuxuu bilaabmaa. Giraanta kowaad, waxaa jira laba jajab, oo tilmaamaya magaca kala-baxa [2. Marka xigta, waxaa jira hal weedo afar siman oo ku jira giraangirta kale ee udhaxeysa labada isdhexgalka, oo muujinaya magaca laba shaashooyin [2.1.3 5. Spiroatom labaad, oo loo yaqaan '5', ayaa lagu daray dariiqa la xidhiidha tirada atomada ka dib markii tirada jajabka ee giraanta terminalka ah, markii ugu danbeysay ee lagu daray xameegyada 9 iyo 10 ee udhexeeya 3 iyo 5 Ka dibna ku dar alkane tiro isku mid ah oo isku dhaf ah oo ku yaala xerada Spiro, decane, namedispiro [2.1.3 5 .2 3].
Noocyada guud ee xeryaha spiro
Qaybta monospirosyclic waxay go'aamisaa magaca karbondoonka waalidka sida ku cad tirada wadarta atomiga ee ku lug leh abuurista giraanta; dhammaan jajabyada ku jira giraangirta spiro waxaa lagu tiriyaa habka giraanta yar yar iyo giraanta waaweyn iyo astaamaha spiro ee la yareeyo; markaa waa la raacayaa maro isku dhafan. Tirooyinka tirinta ee giraanta oo idil waxaa lagu tiriyaa tirada calaamadaha gawaarida ah ee u dhexeeya jumladaha spiro ee isweydaarsiga, oo lagu daro magaca hore ee gaaska oogada gaaska ah ee u dhiganta dhammaan giraanta; Tirooyinka ayaa kala soocaya dhibic hoose, qaabka: salka [a, b] an alkane.
Isku xir dhiska
Saameyntii anomerik ee giraanta het-ka-helida micnaheedu waa laba atomo-elektrom-positive positive ama laba lammaane oo electon ah oo ku jira isku-xirnaantu waxay ku dhexjiraan jihada ka soo horjeeda si loo yareeyo daqiiqada dipole ee molecule iyo hoos u dhigo tamarta maaddada 'intramolecular'. 1968, kooxda cilmi-baarista Descotes waxay marka hore soo jeediyeen saameyn anomerik ah. Marka ay baranayeen baaskiiladaha baaskiilada, waxay ogaadeen in labada xayndaab ee shaxda hoos ku xusan ay ku jiraan 57% of cysticometer and 43% of isomer transitive ee isku dheelitirka isku dhafka ah ee 80 C. Qalabka isomer Isomer wuxuu ahaa mid deggan oo leh farqiga tamarta ee 0.71 kJ / mol. Sababtoo ah saameynta anomerik ee ciyaalka isomer, trans isomer ma laha wax saameyn ah.
Xeryaha qumbaha qaarkood waxay leeyihiin dareen diidmo ah. Spiroatoms wuxuu noqon karaa xarumo chiral ah, xitaa marka ay ka maqan yihiin afar bedelaad oo kala duwan oo loo baahan yahay in la ilaaliyo musqusha. Marka labada siddo oo isku mid ah, Nidaamka CIP wuxuu mudnaanta sare u leeyahay in la kordhiyo kordhinta hal girigga iyo mid kale oo ah mudnaanta hoose. Waa la isticmaali karaa marka giraantu aanay isku mid ahayn.
Xeryahooda Cyclic waxaa lagu tilmaami karaa shuruudaha soo socda:
Tani waa aaladda dabiiciga ah oo labadaba loo yaqaan aliphatic compound iyo barta isku dhafka ah. Waxay ka kooban yihiin hal ama in ka badan oo qoryo-karbosiklic ah oo aan la karin ama aan loo habeynin, laakiin siddooyinku ma aha wax bedelan.
Marka loo eego xajmiga giraanta, naphthenes waxaa lagu kala saari karaa yar yar, dhexdhexaad ah iyo weyn. Cyclopropane iyo cyclobutane ayaa loo tixgeliyaa yar yar. Cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane, iyo cyclooctane si cyclotridecane waa kuwa dhexdhexaad ah, kuwa waaweynna waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin naphthenes waaweyn.
Tani waa shidaal duufaan leh oo leh iskudhaf dhexdhexaad ah carbon-carbon carbon-bond. Monolefinada fudud ee isku-dhafan waxaa ka mid ah cyclopropene, cyclobutene, cyclopentene iyo cyclohexene, halka polyeneska loo yaqaan 'cyclopropadiene', cyclobutadiene, cyclopentadiene. Sug. Olefins qaarkood, sida cyclobuteneand cyclopentene, waxay noqon karaan polymerized sida monomers si ay u sameeyaan polymers.
• Daawada qashinka lagu daro
Saliideedka ugu fudud iyo kan ugu muhiimsan waa benzene iyo noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'toluene, xylene, ethylbenzene' iyo wax la mid ah. Qalabka aromatics, qoryaha aromatic qaarkood ma aha qaabab bani'aadan gebi ahaanba ah, laakiin atomooyinka ku jira iyaga waxaa lagu beddelay nitrogen, oksijiin, sulfur iyo walxo kale. Waxaan ugu yeernaa heterocycles, sida shan yuan sida furan. Giraanku wuxuu ka kooban yahay aalado oksijiin ah oo qalabka wax lagu duubo waxaa ka mid ah atomi nitrogen. Tijeeren wuxuu ka kooban yahay atom sulfur iyo wax la mid ah.
Aromatics waxaa loo qaybin karaa:
• Daawada qashinka lagu walaaqo
• Daawada qashinka dabeeciga ah
Qodobbada loo yaqaan 'hydrocarbons', oo leh qaab isku xidhan, ayaa guud ahaan loo yaqaan 'aliphatic arenes', iyo qashinka loo yaqaan 'aromatic flavors' aliphatic aromatic, waa toluene, etylbenzene, styrene, iyo wax la mid ah.
• Qalabka heterocyclic
Waxay ka kooban tahay giraan aromatic leh oo aan ku jirin giraanta heterosyclic ama bedelka. Qaar badan oo ka mid ah ayaa la og yahay ama khatar ah kansarka. Midda ugu fudud ee kiimikadani waa naphthalene, oo leh laba siddo oo aromatic ah, iyo sidoo kale xayawaanka tricyclic ruthenium iyo phenanthrene.
Daawoyinka dabeecad ee loo yaqaan 'Polycyclic Aromatic Polycyclic' waa mid dhexdhexaad ah, maaddooyinka aan kutlada lahayn ee laga helay dhuxul iyo macdanta. Sidoo kale walxaha dabiiciga ah ee gubista aan dhameystirnayn (tusaale ahaan, mashiinka iyo qoryaha, marka dabka kaynta ku jira dabaysha biomass, iwm.). Tusaale ahaan, waxaa lagu soo saaraa gubasho aan dhamaystirneyn oo shidaal kaarbooni ah sida alwaax, dhuxul, dhuxul, iyo tubaako. Waxa kale oo laga helaa hilibka digaaga ah.
Xeryaha qumman ee dabka ka sarreeya ee ka sarreeya saddex qaybood ayaa leh yaraanta biyaha iyo cadaadiska hooseeya ee biyaha. Marka miisaanka miisaankiisu kor u kaco, cadaadiska iyo baaxada uumiga ayaa hoos u dhacda. Xeryaha bani-aadamka ee baaskiilada ah waxay leeyihiin cadaadis yar iyo cadaadiska biyaha. Sidaa darteed xeryahooda qumaatiga udubdhexaadka ah ayaa sida caadiga ah laga helaa carrada iyo seddexda marka loo eego biyaha iyo hawada. Si kastaba ha noqotee, xeryahooda qumman ee dabiiciga ah waxaa badanaa laga helaa qaybo ka mid ah hawada laga joojiyay hawada.
Xeryaha badeecada badan ee polycyclic oo loo yaqaan 'polycyclic aromatic' ayaa lagu qeexay inay yihiin kansarku. Warbixinnada tijaabada ah ee kiliinikada ayaa tilmaamaya in mudada dheer ee soo-gaadhista heerarka sare ee xeryaha dabiiciga ah ay sababi karaan kansarka maqaarka, kansarka sanbabada, kansarka caloosha iyo kansarka beerka. Xumulaha dabeecadaha ee polycyclic waxay burburin karaan walxaha hidde ee jirka, waxay kicisaa koritaanka unugyada kansarka waxayna kordhiyaan dhacdooyinka kansarka.
Marka miisaanka maaddada molecular la kordhiyo, maadada kansarka ee bacriminta polycyclic aromatic ayaa sidoo kale kordhay, iyo sunta qallafsan ayaa hoos u dhacda. Goobta qoryaha loo yaqaan "Polo", "Benzo" a pyrene (Benzo [a] pyrene), wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee kansarka kiimikada la ogaado.
Wakiilka ballaadhinta polymer
Miisaanka mugga ee polymer inta lagu jiro polymerization ama adkeynta waxaa sababay awoodda van der Waals oo u dhaxaysa maadooyinka monomer ee ku jira xaalad dareeraha ama maaddooyinka mudada dheecaan la'aanta ah, iyo masaafada u dhaxaysa maaddooyinka waa weyn; ka dib markii uu polymerization ama iskutallaabta, Iskudhicida balanta ee u dhexeeya qaybaha dhismaha oo kaliya waxay keenaysaa hoos u dhaca mugga polymer. Waxaa lagu sheegay in hoos u dhacu uu mararka qaar u geeriyoodo polymer, sida keenista gabowga, isbeddelka, iyo hoos u dhaca waxqabadka guud. Si loo xalliyo maskaxda xaddiga xajmiga daaweynta polymerka, farmashiyeyaashu waxay sameeyeen dadaal dheeri ah, laakiin guud ahaan waxay yareyn kartaa oo ma gabi ahaanba tirtiri kartaa xaddiga xaddiga. Ilaa 1972, Bailey et al. waxay sameeyeen taxane ah xeryahooda spiro waxayna ogaadeen in xeryahooda ay yihiin polymerized. Marka mugga uusan hoos u dhicin, way fidisaa. Soo helitaanka isdhexgalayaasha la balaariyay ayaa soo jiitay xiisaha aqoonyahanno badan, wax badan oo cilmi-baaris ah ayaa la sameeyay. Kala-baxayaasha la ballaadhiyay waxay noqdeen qalabyo badan oo firfircoon oo firfircoon. Xeryaha loo qaabeeyey sida spiro orthoester iyo spiro orthocarbonate ayaa ah kuwa la yareeyey oo wanaagsan waxaana loo isticmaalaa diyaarinta qalabka sareeya, waxqabadka sarreeya, qalabka wax lagu buufiyo iyo qalabka wax lagu buufiyo. Isbeddelka guud ee polymers-ka iyo udub-dhexaadka oligomers ee leh kooxo shaqeeya.
Haddii ama ha noqotee aaladda dabiiciga ah waxay ifka u bixisaa iftiinka iyo mugdiga fogaanta iftiinka iftiinka iyo waxtarka iftiinka iftiinka iftiinka wuxuu ku xiran yahay qaabka kiimikada. Fluorescence badanaa waxay ku dhacdaa maadiinnada leh diyaarado adag iyo nidaamyo isku dhafan, taas oo kor u qaadeysa saameynta korontada iyo qalabka xajmiga molecules, taas oo faa'iido u leh hagaajinta waxtarka fluorescence. Waxaa jira waxyaabo badan oo iftiinka-madow oo mugdi ah. Noocyada ugu waaweyn waa: giraanta spiro, vinyl-phenylene vinylene, polythiophene, polythiadiazole iyo xayndaabyada birta. Waxaa ka mid ah, xayndaabyada dabiiciga ah ee loo yaqaan "spirosyclic aromatic" waxay leeyihiin qaabab waaweyn oo isku dhafan iyo rigid fiicnaan iyo isdhexgalka, heerkulka sare ee wareega galaaska iyo xasiloonida heerkulka sare. Qalabka EL wuxuu ku shaqeynayaa hab fudud mana u baahneyn qalab culus, sidaa daraadeed waxa suurtagal ah in la yareeyo kharashka wax soo saarka inta lagu jiro mudadaas iyo in si fudud loo diyaariyo aaladaha ballaaran.
Qalabka loo yaqaan "ringtone" iyo "spiro" oo ku jira hetero atomka ma fududa in la soo saaro iska caabbinta sababtoo ah farsamadooda gaarka ah ee ficilada, waxayna heleen feejignaan ballaaran ee horumarinta sunta cayayaanka. Tusaale ahaan: Rudi iyo al. 3,9-dichloro-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro [5.5] undecane-3,9-dioxide iyo sulfide Hydrogen ayaa la isku dayey in uu soo saaro qalab cusub oo spiro ah, 3,9-dihydro-3,9-dithio-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphospho [5.5] undecane. Waxyaabaha ay deriska yihiin waa nooc cusub oo ka mid ah sunta cayayaanka iyo geedislaha, kaas oo si wax ku ool ah uga saari kara iniin, dhoobo, iwm. Laga soo iibsado qamadiga, badarka, suufka iyo suufka.
Previous post Previous: 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Adeegyada Abbaarada Kiimikada) Nambarka Diiwaanka 22536-61-4
Next post Next: Inta badan Hopeocycles ee Dunida
Categories Select Category Waxyaabaha CMO Aqoonta caafimaadka
2019 CNS Daaweynta Daawada Monotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Pig Maskaxda (37758-47-7)
Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Pyridines
Inta badan Hopeocycles ee Dunida